अंग्रेजी अक्षर M र S बाट नाम आउने मानिसहरुले एक पटक अवस्य पढ्नुहोला ! – Life Nepali
अंग्रेजी अक्षर M र S बाट नाम आउने मानिसहरुले एक पटक अवस्य पढ्नुहोला !
एजेन्सी – मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ।अंग्रेजीको १३ औ लेटर ‘यम ’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘के ’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ । ***थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
( M) ‘यम ’ बाट नाम सूरु हुने मानिसहरुसुखी, भोगी, सत्यबादी, पितृभक्त, बिद्धान, अल्पशक्ति, योजनामा सफल, धनी उद्यमी, महिला सौन्दर्यमा रहने, धार्मिक, अभिमानी, शान्त, साहसी, अरुको डाहा गर्ने,झगडालु, गम्भीर तर क्रोधी स्वभावका व्यक्ति हुन्छन्।‘ यम ’ (M) लेटरबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिहरु दयालु, पराक्रमी, ब्यबसायी स्वभाव, लजालु, कलापारखी, अभ्यासी, महेनती, दक्ष, रिसाहा, स्त्री प्रेमी हुन्छन्।
जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता स्वभावका हुन्छन् ? आउनुहोस् हेरौ ‘एस’ बाट सुरु हुने व्यक्तिको गुणहरु यस्ता छन्। . अंग्रेजीको १९ औ लेटर ‘एस’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘एस’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ । ‘एस’ बाट नाम सूरु हुने मानिसहरु एकदमै मेहनती हुन्छन् । यिनीहरु कुरा गर्न यति सिपालु हुन्छन् कि जोकाहीलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्छन् ।
जहाँबाट जे ज्ञान मिल्न सक्छ उनीहरु त्यस ज्ञान प्राप्त गरेरै छोड्ने प्रयासमा जारी रहन्छन् । यस लेटरबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिहरु प्रभावशाली हुन्छन् । आउनुहोस् हेरौ ‘एस’ बाट सुरु हुने व्यक्तिको गुणहरु=‘एस’ लेटरबाट नाम सुरु गरेका व्यक्तिहरुको मन एकदमै सफा हुन्छ । तर, यिनीहरुको रिस कडा हुने हुँदा अरुको नजरमा नराम्रो बन्न पुग्छन् । सत्य तथा आफ्नो सिद्धान्तमा अडिएर जोकोहीसँग यिनीहरु झुक्न चाहादैनन् ।
आफुलाई श्रेष्ठ सावित गर्न र नेतृत्व लिन ‘एस’ बाट सूरु भएका मानिसहरु ललायित हुने गर्छन् । सामाजिक जीवनमा यी व्यक्तिहरु हसिलो व्यवहार गर्ने खालका हुन्छन् । तर, यिनीहरुको बोल्दा प्रस्तुत गर्ने अन्दाजका कारण उनीहरु नराम्रो बन्ने गर्छन् । प्रेमको मामिलामा यिनीहरु लजाउने गर्छन् । यी व्यक्तिहरु धेरै सोच्ने गर्छन् । प्रेम गर्ने कलाको कमी रहन्छ । तर, प्रेममा ईष्या जागेमा यी व्यक्तिहरु माया पाउन बल्ल काम थाल्छन् ।
वैवाहिक जीवनमा यी व्यक्तिहरु आफ्नो बर्चस्व राख्ने काम गर्छन् । मुख्यतया ‘एस’ नामबाट सुरु गरेका महिलाहरु दाम्पत्य जीवनमा अधिक प्रभाव राख्ने खालका हुन्छन् । विवाहका भएका सूरुवाती दिनहरुमा यी महिलाहरु धेरै समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पूरुषहरुलाई भने विवाह पश्चात धेरै सुख पाउने गर्छन् ।उनीहरुको मेहनतका कारण धन, भौतिक सुख–सुविधा एवम् मानसम्मान हासिल गर्ने गर्छन् । यिनीहरुको जीवनमा केही यस्ता समयहरु आउँछन् जहाँ निर्णय लिन कठिन हुन्छ । यिनीहरु साथीहरुसँगको सम्बन्धलाई गम्भिरताका साथ लिने गर्छन् ।
Previous कोरोनाबाट ब’चेर क’सरी शा’रीरि’क स’म्बन्ध रा’ख्ने ? चर्चित डाक्टरले दिइन् यस्तो सुझाव –
Next मसाज सेन्टरमा यस्तो ध’न्दा, कलेज पढ्ने यु’वती सम्म !